Chorizo ​​साथ दाल Thermomix को साथ बनेको, भिडियो संग सजीलो नुस्खा ThermoRecines
चोरिजोको साथ दाल
यो डिश मेरो सानी छोरी मनपर्ने छ। जब तपाईं उसलाई सोध्छन्: तपाईं बेलुकाको खानाको लागि के चाहानुहुन्छ? उनी जवाफ दिन्छिन्: "दाल"।
सत्य यो हो कि हामी सबैलाई उनीहरू धेरै मनपर्दछ र हप्तामा एक पटककमसेकम म तिनीहरूलाई गर्छु।
थर्मोमिक्स हुनु अघि, मैले तिनीहरूलाई भाँडामा बनाएँ, तर जब सम्म म तिनीहरूलाई यस अद्भुत रोबोटमा बनाउँछु, म तिनीहरूलाई अधिक मनपराउँछु। तिनीहरू बिस्तारै बनाइन्छन् र पूर्ण हुन्छन्। सुरुमा हामी तरकारीहरू पिच्छौं र पीस्यौं, हामी मात्र दाल र आलु पाउँछौं, त्यसैले यो बच्चाहरु कि ती तरकारीहरू फेला पार्न मन पराउँदैनन्, उनीहरू उत्तम लिन्छन्। यदि तपाईंसँग अझै पिलर छैन भने, राम्रो मूल्यमा यहाँ एक छ:
जिलिस टमाटर पिलर ...
अर्को विकल्प छ, एक पटक Thermomix संग दाल, तिनीहरूलाई शुद्ध बनाउनुहोस् र यो पनि धेरै धनी छ।
Thermomix मा chorizo ​​संग दाल बनाउन शुरू गर्नु अघि, म उनलाई राख्नुभयो rइमोजो एक वा दुई घण्टा.
1 चोरिजोको साथ दाल
3 कसरी Thermomix मा दाल बनाउन
3.1 भिजेको बिना तिनीहरूलाई तयार गर्नुहोस्
3.2 भाँडो दाल संग
4 कसरी दाल स्टू तयार गर्ने
5 भाँडामा चोरिजोले कसरी मसूर बनाउन
6 चोरिजोको साथ दालका लागि अन्य व्यंजनहरू
6.1 कोरिजो र रगत सॉसेजको साथ दाल
6.2 तरकारी र चोरिजोको साथ दाल
6.3 चोरिजो र आलुको साथ दाल
6.4 चोरिजो र हेमको साथ दाल
7 दालको गुणहरू
फलफूलहरू हाम्रो आहारमा धेरै उपस्थित हुनुपर्दछ र यो विधिसँग यो सजिलो र सरल छ।
Brown०० ग्राम ब्राउन दाल (यदि तपाईं बाक्लो चाहनुहुन्छ भने g० ग्राम थप गर्नुहोस्)
२ साना आलु, पासा
१/२ चम्मच मिठो प्याप्रिका
चोरिजोको १ टुक्रा
पहिले हामी गाजर पील गर्दछौं र यसलाई टुक्रा-टुक्रा पार्दछौं, चुह्रो धुनुहोस् र कुण्ड काट्नुहोस् (केवल सेतो भाग), टमाटर खोर्नु र तिनीहरूलाई चार टुक्रा पार्नुहोस् र लसुनको बोक्रा ताछ्नुहोस्।
हामी यसलाई गिलासमा जैतूनको तेल र एक चुटकी नुनको साथ थप्दछौं र यस समयमा ब्लेन्ड गर्दछौं २० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 15-5-१०।
हामी प्रोग्राम २ मिनेट, º ०º तापमान र गति १ मा।
मसूर, पासेदार आलुहरू, स्टक क्यूब, बे पत्ती थप्नुहोस् र पानी थप्नुहोस् गिलास (अन्तिम पटकसम्म) भर्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Minutes 45 मिनेट, १००º तापमानमा, चम्चा गति, बाँया पालो र बेकर बिना नै एक पटक तापक्रममा पुग्छ (हामी टोकरी यसको चार खुट्टामा राख्छौं, बोतलको माथि)।
हामी चोरिजो र पेप्रिका थप्छौं। हामी प्रोग्राम १० थप मिनेटहरू, १००º तापमानमा, चम्चा गति, बाँया पालो र बेकर बिना (हामी टोकरीलाई यसको चार खुट्टाहरू, नोजलको माथि राख्छौं) राख्छौं।
यसको लागि हामीलाई केही नुन चाहिन्छ कि भनेर हेर्नको लागि हामी जाँच गर्छौं। यदि त्यसो हो भने, हामी यसलाई जोड्छौं र पहिलेको जस्तै १ मिनेट कार्यक्रम।
मसूर दाल एक विशिष्ट र क्लासिक भाँडा हो। त्यसोभए, उनीहरूको बारेमा यी दुई विशेषणहरू मात्र लेखेर हामी जान्दछौं कि हाम्रो साप्ताहिक मेनूहरू हराउन सक्दैन। तिनीहरू कठोर र चिसो जाडोका दिनहरूको लागि उत्तम हुन्छन्, यद्यपि अन्य समयमा तिनीहरू खपत पनि सक्छन्। के तपाइँ जान्न चाहनुहुन्छ कि कसरी स्वादिष्ट दाल तयार गर्ने?
कसरी Thermomix मा दाल बनाउन
Thermomix मा दाल बनाउन धेरै सहज छ, सबै सामग्रीहरू र programming 45 मिनेट प्रोग्रामिंग थप्ने जत्तिकै सजिलो, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो। अवश्य पनि, यस प्रकारका व्यंजनहरूमा सधैँ सफलता धेरै राम्रो गुणात्मक सामग्रीहरूको प्रयोगमा हुनेछ।
भिजेको बिना तिनीहरूलाई तयार गर्नुहोस्
फलफूलका भाँडा मध्ये एक कमजोरी यो हो कि हामीले उनीहरूको बारेमा अलि अगाडि र योजना बनाएर सोच्नु पर्छ, किनकि हामीले लेगभरु एक दिन अगाडि भिजेको हुनुपर्दछ।
तथापि, दालको लागि हामी pardina दाल प्रजाति प्रयोग गर्न सक्छौं, जो सबैभन्दा सानो हो, कि हामी सिधा पकाउन सक्छौं, भिजेको बिना। समय तपाईंको स्वाद अनुसार लगभग or 45 वा minutes० मिनेटको हुनेछ, तर तिनीहरू अल डेन्टेट हुनेछन् र ती धेरै स्वादिलो ​​हुनेछन्।
तर, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, आदर्श भनेको उनीहरूलाई केहि घण्टा अघि भिजाउन दिनुहोस्, ताकि तिनीहरू थोरै नरम हुनेछन्।
भाँडो दाल संग
र निस्सन्देह, ती व्यक्तिको एउटा एक्स्प्रेसन समाधान जुन हामीलाई यत्ति धेरै मनपर्दछ कि उनीहरूले हाम्रो जीवनलाई केही मिनेटमा बचाउँदछन्। यदि तपाईं द्रुत पेय तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने, २० मिनेटमा हामीसँग केही स्वादिष्ट दालहरू हुनेछन्s.
यस उद्देश्यका लागि, हामी भाँडाको दाल प्रयोग गर्नेछौं, जुन पहिले नै पकाइसकेको छ। हामी तिनीहरूलाई निकास दिन्छौं र तिनीहरूलाई थर्मोमिक्स ग्लासमा थप्छौं जुन हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं। पक्कै पनि, पानीको मात्रा परम्परागत तयारी भन्दा कम हुनुपर्दछ, किनभने खाना पकाउने समय कम हुनेछ। त्यसैले तिनीहरूलाई हल्का रूपमा कभर गर्नु पर्याप्त भन्दा बढी हुनेछ।
सावधान रहनुहोस्, यदि हामी कच्चा मासु प्रयोग गर्ने छौं भने, हामीले तिनीहरूलाई पहिल्यै पकाएको प्रयोग गर्नुपर्दछ किनभने केवल २० मिनेट पकाउँदा तिनीहरू कच्चा हुन्छन्। म सुसेज वा स्मोक्ड बेकन पहिले नै पकाइएको वा कसाई सॉसेज प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु।
कसरी दाल स्टू तयार गर्ने
राम्रो दाल स्टूको लागि प्रमुख सामग्री दुई प्रकारका हुन्छन्: मासु र तरकारीहरू।
मासुको लागि हामी चोरिजो, बेकन, ससेज, पसल वा रगत सॉसेज प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यहाँ कुखुरा प्रयोग गर्नेहरु पनि छन्। सावधान हुनुहोस् यदि कुनै नुनिलो छ भने, ताकि हामी त्यसलाई पहिले हटाउन सक्दछौं।
र तरकारीको रूपमा हामीसँग असीमित सम्भावनाहरू पनि छन्: आलु, गाजर, शलगम साग, चार्ट, पालक, रातो कालो मिर्च र हरी मिर्च, लीक, अजवाइन, पासा टमाटर, फ्राइड टमाटर… जुन तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्दछ!
अन्तमा, यो एक राम्रो स्टू बनाउने बारे हो, सबै भन्दा राम्रो सामग्री र ती सबैलाई हामी धेरै मन पराउँछौं, ती चीजहरू जुन हामीसँग अधिक हात छन् वा ती मौसममा छन्।
भाँडामा चोरिजोले कसरी मसूर बनाउन
क्लासिक को बनाउने चोरिजो संग दाल, यो कुनै जटिलता छैन। थप रूपमा, हामी नियमित भाँडो प्रयोग गरिरहेका छौं, ता कि तपाईं एक्सप्रेस पोट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंलाई भान्सामा कम समय लिने छ। सबैजना स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रकारको भाँडो रोज्न सक्छन्!
त्यस्तै, परिणाम पूर्ण भन्दा बढी हुनेछ। अवश्य पनि, सम्झनुहोस् कि तथाकथित खैरो दाल सधैं राम्रो हुन्छ। यो भिजेको हुनु आवश्यक छैन। अन्यथा, रात पहिले राम्रो दाल प्रशस्त मात्रामा भिजाउन सल्लाह दिइन्छ। को सामग्रीहरू जुन हामीले तल चिह्नित गर्दछौं लगभग दुई व्यक्तिको लागि होत्यसो भए, यदि तपाईं घरमा अधिक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले मात्र डबल गर्नुपर्नेछ। के हामी काममा तल झर्छौं?
सबै भन्दा पहिले, गरौं २२n ग्राम दाल चुनिएको भाँडामा।
एक प्याज र चार लसुन लौंग सानो टुक्रा मा काट्नुहोस्। हामी पनि थोरै जैतुनको तेलले त्यसलाई भाँडामा थप्छौं।
अब हामीले चोरिजोलाई हाम्रो दालमा समाहित गर्नु पर्छ। तिनीहरूलाई धेरै बाक्लो टुक्राहरूमा काट्नुहोस्। दुई व्यक्तिका लागि तपाई १०० ग्राम चोरिजो थप्न सक्नुहुन्छ।
यी सबैमा हामी चार थप्न जाँदैछौं चिसो चिसो पानी। यसले हामीले हाम्रो भाँडोमा थपेका सबै थोकलाई कभर गर्नुपर्दछ। थोरै नुन, मीठो प्याप्रिका र तपाईं यसलाई चुटकी oregano मार्फत समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले छनौट गर्नुभयो प्रेसर कुकर, यो उमाल्न गरौं। एक पटक यो हुन्छ, यसलाई कभर र बन्द गर्नुहोस्, यसलाई स्थिति २ मा राख्दै। त्यसपछि, तपाईं करीव2मिनेट, खाना पकाउनुहुनेछ। याद राख्नुहोस् कि फेरि ढक्कन खोल्नु अघि तपाई आफैले दाउरा हटाउनु पर्छ ताकि तपाईलाई जलाउनु हुँदैन।
हामी जब चाहन्छौं परम्परागत भाँडाको अनावरण गर्न सक्दछौं, जे होस् जहिले पनि सावधानीसँग। मसूर दाल पूर्ण नभएसम्म हामी समय-समयमा हलचल गर्छौं। अधिक वा कम, कुल मा आधा घण्टा।
केही खाडी पातहरू राख्नुहोस्, आगोसँग पहिल्यै बन्द छ र फेरि कभर गर्नुहोस्, आराम गरेर।
यो एक हो आधारभूत व्यंजनहरु र त्यो chorizo ​​मुख्य नायकको रूपमा छ। यस तरीकाले यसले हामीलाई छोड्ने स्वाद सबैभन्दा विशेष हो। हामी प्रत्येक चम्चा को अधिकतम बनाउन हुनेछ। अवश्य पनि, यदि तपाइँ आविष्कार गर्न र नुहाउने आफैमा केहि विविधताहरू प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले भर्खरै के पत्ता लगाउनु पर्छ। तपाई पहिले कुन गर्नुहुन्छ?
चोरिजोको साथ दालका लागि अन्य व्यंजनहरू
हामी त्यो भाग्यशाली छौं यस जस्तो प्लेट, विभिन्न भिन्नताहरू स्वीकार गर्दछ। यस तरिकाले, कसैको लागि, चोरिजो अत्यावश्यक चीज मध्ये एक हो, तर हुनसक्छ अन्य मानिसहरूले दालमा अलिकति तरकारीहरू रुचाउँछन्। यदि त्यहाँ धेरै स्वादहरू छन्, त्यहाँ धेरै भिन्नताहरू हुनुपर्दछ। केवल यस तरिकाले, हामी परिवारका प्रत्येक सदस्यको स्वाद पूरा गर्नेछौं।
कोरिजो र रगत सॉसेजको साथ दाल
रगत सॉसेज अन्य प्रकारका ससेजहरू हुन् जसले यस प्रकारको भाँडालाई विशेष स्पर्श दिन्छ। को चोरिजो र रगत सॉसेजको साथ दाल ध्यानमा राख्नको लागि अर्को आधारभूत विचार हो। यद्यपि हामीलाई थाहा छ कि आफैंमा यसमा नुन, प्याज र विभिन्न मसला जस्तै पेपरिका वा ओरेगानोको स्वाद रहेको छ ... कल्पना गर्नुहोस् यसले हाम्रो तारा डिशमा कत्ति योगदान पुर्‍याउन सक्छ!
चरणहरू तयारी गर्न को लागी अनुसरण गर्नुहोस् रगत सॉसेजको साथ दाल ती हामीले अघिल्लो पटक उल्लेख गरेका छन्। साधारणतया, यस अवस्थामा रगत सॉसेज थपिन्छ जब हामी कोरिजो थप्छौं। यसबाट सबै रस प्राप्त गर्न, यसलाई टुक्रा-टुक्रा पार्नु र तिनीहरूलाई थोरै पन्चर गर्नु पनि उत्तम हुन्छ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्, जब उनीहरूले रगत सॉसेज कसरी पकाइन्छ भनेर हेर्छन्, तिनीहरूले यसलाई दालबाट निकाल्छन् र थालमा सेवा गर्छन्, खाना पकाएपछि एकपटक। यो सबै स्वादमा निर्भर गर्दछ। चोरिजो जस्तै म सधैं यसलाई भाँडामा राख्छु। सबै भन्दा राम्रो कुरा कि यो धेरै नबिग्रनुहोस्, कम गर्मी मा पकाउनु हो।
तरकारी र चोरिजोको साथ दाल
दाल एक्लै एक उच्च ऊर्जा र स्वस्थ खाद्य अनुक्रमणिका छ। त्यसोभए, कल्पना गर्नुहोस् यदि हामीले यसमा केही तरकारीहरू पनि थपेका छौं। हुन्छ हो, क्यालोरीमा कम तपाईं यसो भन्न सक्नुहुन्न कि यो यस्तो थाल हो, किनकि चोरिजोले उनीहरूलाई बढाउँदछ। यद्यपि स्वस्थ र आधारभूत यो जे भए पनि विचार गर्न सकिन्छ। म कसरी प्लेट बनाउँछु तरकारी र chorizo ​​साथ दाल?.
पहिले हामी भद्राक्षको तेलको थोपरोको साथ आगोमा भाँडो राख्छौं।
यसमा, हामी थप्नेछौं बारीक काटिएको प्याज र लसुन.
थप रूपमा, हामीले दुई गाजरलाई एकीकृत गर्नुपर्दछ, सानो टुक्राहरूमा काट्नु पर्छ र आधा रातो मिरी र हरियोको आधा आधा भाग।
हामीले लगभग राम्रोसँग ब्राउन गर्नुपर्नेछ, करिब minutes मिनेट आगोमा लगभग।
यस समय पछि, हामी काट्छौं र काट्छौं तीन सानो टमाटर.
अन्तमा, हामी चोरिजो, र पानीको साथ दाल थप्छौं। मौसम स्वाद गर्न र यसलाई बिस्तारै पकाउन दिनुहोस्।
यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने, यहाँ हामी तपाइँलाई पकाउने तरिका देखाउँदछौं थर्मामिक्सको साथ तरकारीको साथ दाल.
चोरिजो र आलुको साथ दाल
यस अवस्थामा, chorizo ​​को थप, हामी केहि आलु थप्न जाँदैछौं। हामीलाई थाहा छ हाम्रो भान्साकोठामा आलुहरू ती आधारभूत तत्त्वहरू मध्ये एक हुन्। तिनीहरूलाई उपभोग गर्नका एक स्वास्थ्यकर तरीका पकाइएको वा बेक्ड हो। केवल एक मध्यम आकारको आलु, पकाइएको, 30० भन्दा कम क्यालोरी हुने भनिन्छ। त्यसोभए ... हामी केलाई पर्खिरहेका छौं हाम्रो दालमा तिनीहरूलाई परिचय दिन?
केहि बनाउन चोरिजो र आलुको साथ दाल, हामीले पछि खाना पकाउने समयलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। हामी चाहान्दैनौं तिनीहरू अति टाँसिन सक्छन्, तर कम्प्याक्ट तर नरम रहन। कहिलेकाँही यसलाई प्राप्त गर्न चुनौती जस्तो देखिन्छ, तर हामीले कल्पना गरेभन्दा सजिलो छ। यसलाई प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका हाम्रो दालको तयारी सुरु गर्नु हो, जसमाथि हामी टिप्पणी गर्दै छौं। एक पटक भाँडो उमालेपछि, तब हामी आलु धेरै टुक्रा मा काट्न को लागी जोड्न सक्छौं। सामान्य नियमको रूपमा र खाना पकाउने सबैभन्दा पारम्परिक तरीकाको रूपमा, आधा घण्टा भन्दा कममा हाम्रो आलु संग स्ट्यू.
चोरिजो र हेमको साथ दाल
यस अवस्थामा, सबै भन्दा मसलादार र नुनिलो स्वाद थप्न हामी केही बनाउन लाग्नेछौं चोरिजो र ह्यामसँग दाल। पछिल्लो ती गाउरोस्टोनोमीमा भएका ती उत्कृष्ट खानामध्ये एक हो। एक्लै वा सँगै, यो स्वादको लागि सधैं उत्तम हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा, दालमा थप्नका लागि तपाईंलाई १०० ग्राम हेम प्रदान गरिन्छ। तपाईं यसलाई पहिले नै क्युब्समा काटिएको खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, जुन सधैं छिटो र सजिलो हुन्छ। साथै, ताकि यो धेरै बढ्दैन वा सुक्दैन, खाना पकाउन समाप्त गर्नु अघि यसलाई १० मिनेट जति थप्नुहोस्। स्वाद एकीकृत गर्न यो सँधै राम्रो हुन्छ, तर यस प्रकारको मासुको बनावट राख्दै। अवश्य पनि, हामी तपाईंलाई यो कम्पोनेन्ट थप्नु अघि सिजन नलगाउन सल्लाह दिन्छौं किनभने हामीलाई थाहा छ कि यसले नुनको अतिरिक्त टच प्रदान गर्दछ।
मसूरको स्वास्थ्यमा राम्रो गुणहरू छन्। ती मध्ये एक हो कि तिनीहरू प्रोटीनले भरिएका छन्। यसको नुनको मूल्यको कुनै पनि खानामा केही आधारभूत। थप रूपमा, हामीले देख्यौं, हामी जहिले पनि तिनीहरूलाई धेरै सामग्रीहरू र एक्लो बनाउन सक्दछौं, ती व्यक्तिहरूको लागि जो प्रश्नको थालमा थप क्यालोरी थप्न चाहँदैनन्।
थप रूपमा, उनीहरूसँग तथाकथित ढिलो ढिलो शोषण कार्बोहाइड्रेट, साथ साथै फाइबरको ठूलो मात्रा हुन्छ। को फोलिक एसिड यो उनीहरूमा धेरै छ। यो गर्भवती महिलालाई वा केहि महिनामा गर्भावस्थाको योजना बनाउने महिलाहरूको लागि महत्वपूर्ण छ, यसैले, यो रक्त संचार सुधार गर्नका लागि पनि उत्तम छ।
को लागी भिटामिन तपाईलाई जान्नुपर्दछ कि समूह बीका ती फेला पर्नेछन्। यो समूह हाम्रो मेटाबोलिज्म जाँचमा राख्न, साथ साथै स्नायु प्रणाली सुधार गर्न पनि उत्तम छ। वास्तवमा यो भनिन्छ कि यी भिटामिनहरूको अभावले डिप्रेसन वा चिन्तालाई निम्त्याउन सक्छ। को मसूरको बीचमा खनिजहरू फेला पर्‍यो तिनीहरू पोटेशियम, म्याग्नेशियम र क्याल्सियम हुन्। त्यसोभए, यी सबैको साथ, हाम्रो शरीरले मात्र हामीलाई धन्यवाद दिन्छ, तर हाम्रो कपाल, छाला र न nailsहरू पनि। मसूरको दालले तिनीहरूलाई अधिक शक्ति दिनेछ। तिनीहरूलाई तयार गर्न के प्रतीक्षा गर्ने?
तरकारीहरुका साथ पनि प्रयास गर्नुहोस्:
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » तरकारीहरू » चोरिजोको साथ दाल
मसँग थर्मामिक्स २१ छ, म दालहरू पुतलीमा राख्छु गति १ मा ठीक छ
मलाई त्यस्तै लाग्छ, मारिसा। यो कसरी जान्छ हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईले भनेको जस्तो मलाई लाग्छ उनीहरूले तपाईलाई राम्ररी फिट गर्नेछन शुभकामना।
म कती पानी छ म सफेद सेम मा राख्नु छ?
नमस्ते Rocio। सेतो बीन्स को लागी "chorizo ​​संग सेतो बीन्स" को लागि नुस्खा हेर्नुहोस्। तिनीहरू स्वादिष्ट छन्। शुभकामना।
नमस्ते एलेना, एक प्रश्न, के मैले कुनै समय पुतली राख्नु पर्छ?
यो मैले देखेको छैन जस्तो देखिन्छ तर मरीसाले भने कि उसले यसलाई राख्छ, म श doubt्कामा परेको छु।
म तपाईंको टिप्पणीहरु को प्रतीक्षा गर्छु
अंगालो र धन्यवाद
मलाई तपाईंको वेबसाइट मनपर्दछ! !!!!!!!
नमस्ते रूथ, म पुतली राख्दिन। बाँया पालो र चम्चा गति संग तिनीहरू उत्तम छन्।
हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
धेरै धेरै धन्यवाद एलेना। म यो सप्ताह को अन्तमा प्रयास गर्छु। हिजो मैले तपाईका धेरै भन्दा धेरै विधिहरू सबै सामग्रीहरू खरीद गरें। यस हप्ताको अन्तमा म यसको साथमा जान्छु।
तपाईं साँच्चिकै राम्रो काम गर्नुहुन्छ, बधाई!
नमस्ते! म तपाईंलाई एउटा पक्षमा सोध्छु र यो हो कि तपाईंले कति डाइनरहरू राख्नुहुन्छ तपाईंले थर्मोमिक्सबाट बनाउनुहुने प्रत्येक थालको मात्रा दिन्छ, किनकि मलाई यो थाहा हुँदैन कि यो दुई वा for को लागि हो र म सँधै बढी गर्छु ...
अभिवादन, म विचलित नहुने आशा गर्दछु।
नमस्कार क्रिस्टिना, यो विशेष विधि4व्यक्तिको लागि हो। तपाईं सहि हुनुहुन्छ, सुरुमा हामीले यो राखेनौं, तर हामीले यसलाई लामो समयदेखि राख्यौं। यदि तपाईंसँग अर्को रेसिपीको बारेमा केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सोध्न नहिचकिचाउनुहोस् र पक्कै पनि यो कुनै चिन्ताको विषय होइन। हामीलाई हेर्न र अनुसरण गर्न धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
शुभ अपराह्न केटीहरू, म ती लाई सानो थोरै योगदान दिन्छु जसले रेखाको थोरै ख्याल राख्दछन् र कोरिसिलो नहेर्नको लागि हेर्छन्। यस अवस्थामा म चोरीजो पेप्रिकाको लागि समान मात्रामा मिठो प्याप्रिका परिवर्तन गर्दछु। त्यसैले यो स्वाद दिन्छ तर goo बाँकी छ। म यसलाई प्राय: डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा सजिलैसँग फेला पार्न सक्दिन, तर यदि तपाईं जडिबुटीमा जानुहुन्छ भने तिनीहरूसँग पक्कै पनि यो हुनेछ। सबैलाई चुम्बन र मलाई आशा छ कि यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। Ciao !!!
चारीलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद चारी। म यसलाई हेर्नेछु र प्रयास गर्छु। शुभकामना।
एउटा प्रश्न। यदि म recipe- people व्यक्तिको लागि यो नुस्खा बनाउन चाहान्छु भने के मैले दालको संख्या दोब्बर पार्नु पर्छ? तर ... पानी अब फिट छैन। यो राम्रो हो कि म यो दुई पटक गर्दछु? धन्यवाद!
नमस्ते Chus, यसलाई दुई पटकमा गर्नु राम्रो हुन्छ। तिनीहरू नुस्खा को मात्रा संग स्वादिष्ट छन् र यो अधिक जान सक्दैन, तपाईं दुबै राशि आवश्यक छ भने तपाईं यो फेरि गर्नुपर्ने छ। शुभकामना।
एलेना, यदि म थोरै मर्मिनेटेड रिब थप्न चाहान्छु, दोस्रो कोर्स गर्नबाट बच्न, मैले कहिले यो थप्ने?
नमस्कार Chus, जब हामी १० मिनेट प्रोग्रामिंगको सट्टा तरकारीहरू तर्दछौं, तपाईं 10 मिनेट प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, पसलहरू थप्नुहोस् र बाँकी minutes मिनेट कार्यक्रम गर्नुहोस्। बाँकी नुस्खा उही हो। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
हेलो, मैले भर्खरै तपाईले राख्नु भएको मात्राबाट परदिना दाल बनाउनु भयो र ती बाहिर पानीमा निस्किरहेका छन्, किन मलाई यस्तो भएको?
मैले बिर्सिए !! बढी मैले 420२० ग्राम दाल राखेको छ
मलाई थाहा छैन, सिल्भिया। तिनीहरू 300 जीआरको साथ मेरो लागि उपयुक्त छन्। मसूरको र खाना पकाउने समयसँगै पानी बाफ हुन्छ। मलाई सूप मन पर्छ र त्यसैले 300०० जीआरको साथ। तिनीहरू हामी जस्तो मनपर्दछ त्यस्तै रहन्छन्, आलुको साथ ब्रस्टले उनीहरूलाई मोटो बनाउँछ। कम पानीको साथ प्रयास गर्नुहोस्, पहिलेको अन्तिम चिन्हमा गिलास भर्नुहोस्। शुभकामना।
दाल भनेको त्यस्तो चीज हो जुन मेरो लागि कहिले राम्रो हुँदैन, तर यो नुस्खाको साथ तिनीहरू घरैमा सफल हुन्छन्, कोरिजो बिना नै। धन्यवादssssssssss.A चुम्बन
मारिया, हामीलाई हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु खुशी छु। शुभकामना।
Ana belen भन्यो
नमस्ते केटीहरू, तपाईं महान हुनुहुन्छ, म तपाईंको व्यंजनहरू मनपराउँदछु, श doubt्का गर्दा जब तपाईंले स of्केत गर्नुहुन्थ्यो कि तपाईंले भाँडाको सट्टा टोकरी राख्नुभयो, के तपाईंले भोकको लागि प्रयोग गर्नुहुने टोकरीलाई मतलब गर्नुहुन्छ ???? मलाई लाग्छ अन्तिम पटक मैले पकाउँदा गब्लेटसँग त्यहाँ फरक छ। राम्रो चुम्बन, राम्रो केटीहरु ...
के तपाईंले दाल भाँडामा राख्नु भएको छ वा तपाईंले भिजाउनु पर्ने किसिमको हो?
माफ गर्नुहोस्, मैले यो भिज्न पहिले नै देखेको छु। खाना पकाउने समय यदि तिनीहरू भाँडोबाट उस्तै हो त?
नमस्ते सिल्भिया। मसूरको डिब्बा राखिएको छ भने, तपाईंले धेरै समय कम गर्नुपर्दछ, किनकि तिनीहरू पहिले नै पकाइसकेका छन्। मलाई लाग्छ कि एकपटक तपाईंले दाल १ 15 मिनेटमा थप्नुभयो भने ती हुन्छन्। शुभकामना।
सबैलाई नमस्कार, यो म पहिलो पटक लेख्छु र सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई यो ब्लगको साथ तपाईले गरेको कार्यका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि पक्कै पनि यो हो… .. त्यहाँ कुनै शब्दहरू छैनन्। मसँग टीएम have१ मात्र एक महिनाको लागि छ र मैले धेरै रेसिपीहरू बनाएको छु जुन तपाईले प्रकाशित गर्नुभएको थियो र मैले केहि साथीहरूलाई प्रोत्साहन गरें जसले केही वर्षसम्म यसलाई केक र पेस्ट्री भन्दा बढि बनाउनको लागि प्रोत्साहित गरे। मलाई खाना पकाउने बेलामा दाल (वा कुनै अन्य फली) के हो भनेर म धेरै स्पष्ट छैन किनकि म तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्दछु, त्यसैले समय बचत गर्न, विशेष गरी टा टीएम हुनु अघि। म हेर्न चाहन्छु कि तपाईले मलाई समय र टोकरी के बारे सोच्नुहोस् र गब्लेट के हो भनेर बताउनुभयो। यसलाई आफैं बुझ्नको लागि: टोकरी त्यहीं छ जहाँ पास्ता पकाइन्छ र तपाईंले त्यसलाई थाँटमा राख्नु पर्छ ??? र गोजेट पारदर्शी छ ???????????????? प्रश्नको लागि माफ गर्नुहोस्, तर यदि होईन, मलाई थाहा छैन। तपाइँ धेरै धेरै धन्यवाद
नमस्ते मर्खे, तपाईंले यसमा पारदर्शी कप राख्नुपर्दैन र त्यसो गर्नुहुन्न कि तपाईंले टोकरीलाई ढकनीको माथि राख्नुहुन्छ। यस तरिकाले राम्रोसँग वाफ हुन्छ र तपाईंलाई स्प्लाश गर्दैन। फलफूलहरूका लागि, सत्य यो हो कि तिनीहरू पूर्ण छन्, तर दालको लागि यो नुस्खा प्राकृतिक मसूरको साथ, पकाइएको छ। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
तिनीहरू स्वादिष्ट छन् !!! मैले तिनीहरूलाई यो दिउँसो गरिसकें र तिनीहरू महान बाहिर निस्के! तपाईको व्यंजनहरुका लागि धेरै धन्यबाद, तपाई मलाई कति सहायता गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन ...
हामीलाई हेर्नु भएकोमा धन्यवाद, रोजा।
दाल स्वादिष्ट हुन्छन् ... मैले तिनीहरूलाई माया गरेको छु र अबदेखि म तिनीहरूलाई तयार गर्दैछु। धन्यवाद नुस्खा को लागी ..
म खुशी छु कि तपाईंले सुसानालाई मनपराउनुभएको छ, हाम्रो पृष्ठ अनुसरण गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
राफेल मार्टिनेज कास्टेलानो भन्यो
तपाइँले भर्खरै मलाई ठूलो निराशताबाट बाहिर निकाल्नुभयो, tmx द्वारा दाल बनाउन धेरै पटक प्रयास गरे पछि, म अन्ततः सफल भएँ, धन्यवाद।
कहिलेकाँही सूप अन्य समयमा शुद्ध हुन्छ, आज म तपाईको नुस्खाको साथ पुस्तकबाट बाहिर आएँ।
दाल पकाउने एक बाहिर निस्केन, ती स्वादिष्ट बाहिर आए !!
मैले जे थपेको छु त्यो आधा प्याज भएको छ किनकि यो एकदम स्वस्थ छ र मलाई यसको स्वाद मनपर्दछ।
मैले मेरो मुटुमा अडिएको काँडा हटाएको छु किनभने मलाई दाल मन पर्छ।
धेरै धेरै धन्यबाद, नयाँ वर्ष २०११
राफेल मार्टिनेज कास्टेलानोलाई जवाफ दिनुहोस्
कति राम्रो राफेल !! म खुसी छु कि तपाईं अन्ततः यस नुस्खाको साथ सफल हुनुहुनेछ। सत्य यो हो कि जबसम्म एक व्यक्तिले नराम्रो तरिकाले पार गरिसकेको एक विधिको पोइन्ट फेला पार्दैन।
म खुशी छु, राफेल! हामीलाई हेर्नुभएकोमा र २०१ Happy लाई धन्यबाद दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद!
नमस्ते केटीहरू !! यो पहिलो पटक हो कि मैले थर्मोमिक्सको साथ वास्तविक खाना बनाउँदछ! उनले पहिले बनाएका सबै केक, मिठाई र खाजा थिए। तर आज मैले केहि दाल बनायो !! पहिलो हुन, तिनीहरू धेरै राम्रा छन्। तपाईले गरेको कामका लागि धेरै धेरै धन्यबाद
मलाई खुशी छ कि तपाईंले उनीहरूलाई मन पराउनुभयो, पैट्रसिया! शुभकामना।
मैले भर्खरै लेन्ट्जा बनाएको छु र ती मनि जस्तै मन पराउँछन्, धेरै राम्रा छन्, पूरै र बाक्लो ब्रोथ। अब हामीहरू मेरो श्रीमान् र छोराले खाजा खाने बेला के सोच्दछौं हेरौं। म तिमीलाई यसको बारेमा बताउनेछु।
आज सम्म मैले उनीहरूलाई थाँडा बनाउने आँट गरेकी थिइन, तर तपाईका व्यंजनहरू मैले बाहिर ल्याएको सबै भन्दा बाहिर आएको देखेर मैले निर्णय गर्ने निर्णय गरें।
र सोच्नको लागि कि मैले तपाईंलाई धेरैजसो दिनमा भेट्नु भन्दा पहिले जुन मैले गरेको थिए त्यो धुल्य छ।
म आशा गर्छु कि तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुनेछ, मारिया! मलाई भन अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
पुष्टि भयो, तिनीहरू धेरै राम्रा बाहिर आए। आजदेखि म उनीहरूलाई थाँहा बनाउँछु जति राम्रो हुन्छ उनीहरू। यी पाककृतीहरूको लागि धन्यबाद जुन हामीलाई धेरै मद्दत गर्दछ। चाओ।
म खुसी छु, मारिया! अभिवादन र धेरै धेरै धन्यबाद।
नमस्ते ... मसँग T21 थर्मोमिक्स छ, तर मसँग पुस्तक छैन किनकि म केहि पनि कसरी गर्ने भनेर जान्दिन, र मलाई वास्तवमै यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्दिन, म t31 किताब हो भनेर सोध्न चाहान्छु। यसको लायक छ, यदि मसँग छ भने, र यो बाँया पालो हो ...
नमस्ते मार्च, हो, तपाईंले दिमागमा केहि चीजहरू राख्नुपर्दछ। जब यसले बायाँ तिर मोड भन्छ, तपाईंले पुतली र भेल राख्नुपर्दछ। १. यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई भन्नुहोस् कि हामी तपाईंको लागि स्पष्टीकरण दिनेछौं। तर सबै भन्दा माथि, ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं सबै व्यंजनहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। शुभकामना।
माफ गर्नुहोस्, तर म टोकरीको बारेमा राम्ररी बुझ्न सक्दिन। तपाई किन यसो गर्नुहुन्छ? म यी अवसरहरू लिन चाहन्छु तपाईंलाई फेरि यी स्वादिष्ट व्यंजनहरूको लागि धन्यवाद दिन। अभिवादन।
Dulce लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मीठो, यदि हामीले कप निकाल्छौं र टोकरी राख्यौं भने, यो छिटो वाष्पीकरण हुन्छ र सास अलि मोटो हुन्छ। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
म दालमा चामल थप्न चाहान्छु, मलाई चावलको साथ खानको बानी छ, र कति राख्नुपर्दैन र कहिले ती बाक्लो छैन। सत्य यो हो कि हामी तिनीहरूलाई थोरै सुस्त मन पराउछौं।
नमस्ते सान्ड्रा, "चामल र कुखुराको ससेजसँग दाल" को नुस्खा हेर्नुहोस्। मैले लिङ्क राखें: http://www.thermorecetas.com/2010/11/09/Recetas-Thermomix-Lentejas-con-arroz-y-salchichas-de-pollo/
महान !! यो नुस्खा मा आउँछ के रूप मा सबै !! हामीले उनीहरूलाई माया गर्‍यौं र मलाई लाग्छ कि म तिनीहरूलाई फेरि भाँडोमा बनाउँदिन। नुस्खा मा बधाई! अभिवादन र चुम्बन
मलाई खुशी छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो! सत्य यो हो कि तिनीहरू आफ्नो बिन्दुमा छन्। शुभकामना।
नमस्कार एलेना! आज मैले दाल तयार पारेको छ र ती स्वादिष्ट बाहिर आयो मसँग अर्को नुस्खा थियो तर मलाई यो राम्रो लाग्छ उनीहरू कसरी यो संगै छन्, यद्यपि मलाई लाग्छ म पानीसँगै धेरै टाढा पुगेको छु र त्यहाँ धेरै शोरबा थियो तर मैले फेंक्यो। थोरै र त्यो हो। मलाई तपाईको ब्लग साँच्चिकै मनपर्दछ।
मलाई खुशी छ कि तपाईंले उनीहरूलाई मनपराउनु भयो, कोांची! अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
स्वादिष्ट, केटीहरू! सूफी तर सही बिन्दुमा, सबै भन्दा कम पानी भएको, राम्रो पकाइएको, छिटो र धेरै सजिलो छैन। तपाई अझ बढि माग्न सक्नुहुन्न। धन्यबाद सँधै
मँ खुशी छु तपाईंले तिनीहरूलाई मनपराउनु भयो, मारियान! शुभकामना।
नमस्ते! मसँग टिएम २१ छ र मैले यो नुस्खा बनाएको छ, मसूरको दाल मनपर्दैन, तर उनीहरूले वास्तवमै ठूलो स्वादका साथ मंत्रमुग्ध गरे, तिनीहरू केवल बाक्लो र लगभग शुद्ध भएकी छन्, म पुतली राख्छु, तर मैले बुझिन। यो राम्रो छ किन पुतली संग यो कसरी प्राप्त हुन्छ? कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् किनभने स्वाद अद्भुत छ।
Toñy लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते तोई, मलाई लाग्छ कि यो स्वादको कुरा हो किनभने मैले भर्खर एउटी केटीलाई उत्तर दिएँ जसले उनीहरू भन्छन् कि तिनीहरू सुप्याई थिए र अन्यले भन्छन तिनीहरू एकदम सही छन्। टोकरीको बिर्कोको माथि राखिएको छ। हामी कचौरा हटाउँछौं र यसले हामीमा नफर्कियोस्, हामी टोकरी राख्छौं र यसरी राम्रोसँग वाफ हुन्छ। तपाईंले फोटोमा देख्नु भए जस्तै तिनीहरू मलाई फिट गर्छन् र तिनीहरू चर्दैनन, म विश्वास गर्छु कि दालको प्रकार र ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ। शुभकामना।
तपाईको जवाफको लागि धेरै धन्यबाद, मलाई लाग्छ कि यो दालको लागि पनि हो, म परडीनाससँग कोशिस गर्नेछु ... तपाई के भन्नुहुन्छ ... धेरै धेरै धन्यवाद र पृष्ठको लागि साँच्चिकै बधाई ...
मारिजोज 68 भन्यो
नमस्कार, मैले दाल बनाएको छु र उनीहरूले राम्रो स्वाद लिएका छन् तर तिनीहरू निकै सूँढी छन् मैले pardina मसूर प्रयोग गरिसकेका छौं, यससँग यसका लागि केही कुरा छ, धन्यवाद
Mariajose68 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मारियाजोजी 68,, म पनि माफीको दाल प्रयोग गर्दछु, तर मलाई लाग्छ कि यो स्वादको कुरा हो। हामी सानो सूपहरू मनपराउँदछौं र रेसिपीमा भएका टिप्पणीहरूको कारण त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले तिनीहरूलाई सिद्ध र अन्य मानिसहरूलाई पनि बाक्लो पाउँदछन्। मलाई लाग्छ यति धेरै भिन्नताहरू प्रत्येकको स्वादको कारण हो। शुभकामना।
नमस्ते! शनिबार मैले दाल बनाए, तिनीहरू अलि बाक्लो भए र आलुहरू टुक्रिए, यो सम्भव छ कि पासाले उनीहरूलाई अलि सानो काटिरहेको थियो? र यही कारणले गर्दा यसले मलाई गाढा बनायो .., धन्यबाद! - खैर, तिनीहरू स्वादमा साँच्चै राम्रो बाहिर आए!
नमस्ते माइटे, यदि आलु धेरै टाढा खस्छ भने, त्यसले तिनीहरूलाई बाक्लो बनाउँछ। आलु थोरै ठूला टुक्रामा राख्नु उत्तम हो र तपाईले थोरै पानी थप्न सक्नुहुन्छ। शुभकामना।
दालको तौल भिजेको भन्दा पहिले छ वा भिजेपछि हो?
मार्ता to34 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मार्टा 34, यो तिनीहरूलाई भिजाउन पछि राख्नु भएको छ। शुभकामना।
के यो दाल को अर्को प्रकारको बनाउन सकिन्छ?
नमस्ते मार्टा, 34, तपाईले अधिक मन पराउनुहुने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म सधैं खैरो दाल प्रयोग गर्दछु, जुन हामीलाई सबैभन्दा मनपर्दछ। शुभकामना।
मम्म्म्म, स्वादिष्ट ... आज मैले यो नुस्खाको साथ प्रयास गरें र मैले तिनीहरूलाई बनाउने अन्तिम पटक हुनेछैन ... किनकि जिफिमा मसँग केही उत्तम दालहरू थिए ... र मैले कोरिजो थपेन (किनकि किनकि मसँग छैन, अवश्य)। अलि अलि अलि मीठो पेपरिका र थोरै मसलादार (उनीहरूलाई थोरै मूर्ख बनाउन) हे ... आलु पनि टुक्रिएको छ, अर्को पटक म तिनीहरूलाई फ्याँक्छु। थोरै पछि, हेर्नको लागि ... म पकाउनेहरू बनाउने पक्षमा छु तपाईंले राख्नु भएको अनुसार ... तर त्यसो भए तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो मनपर्ने बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले केहि छोड्नुभएको छ वा हराइरहेको छ भनेर विचार गर्नुभयो भने किनभने त्यो पहिले नै छ। स्वाद मा जान्छ ... बधाई केटीहरु ...
म खुशी छु, पास्कु! व्यंजनहरु को बारे मा राम्रो कुरा हामी तिनीहरु लाई आफ्नो मनपर्ने मा अनुकूलन गर्न सक्छन्। शुभकामना।
म एक हप्ताको लागि टिएम using१ प्रयोग गर्दैछु म तपाईंलाई बधाई दिन चाहन्छु, दाल महान् छ, म कसरी माउरोलोफ बनाउन जान्छु कसरी हुन्छ भनेर
म खुशी छु कि तपाईंले उनीहरूलाई मनपराउनु भयो, बियत्रियाज! शुभकामना।
मसूर अहिले राम्रो छ। मैले यसलाई थर्मोमिक्समा पहिलोपल्ट बनाएको छु, यद्यपि मसँग २ बर्ष पहिले यो प्रयोग गरिरहेको छु, खरीद काममा परिवर्तन भएको र दुईको अनुकूलनको साथ मिलेको छ। चीजहरू मेरो लागि अलि जटिल थियो, राम्रो के भइरहेको थियो, दाल एकदम राम्रो छ, हामी दोहोर्‍याउनेछौं, म ब्लगलाई माया गर्दछु।
एक्लैलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई मन परेकोमा म खुशी छु, सोलो!
केटीहरू, दालको साथ कस्तो सफलता! मैले तिनीहरूलाई गत शनिबार बनाएको थिएँ, मेरो सानोले एउटा डिश खायो जसको बारेमा मैले तपाईंलाई बताइन पनि र मेरो श्रीमान्, जो खानको लागि अलि "विशेष" हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई मन पराउनुभयो, त्यसैले म तिनीहरूलाई निश्चित रूपमा दोहोर्याउनेछु।
म धेरै खुसी छु, लॉर्ड्स! यो मेरो सानी छोरीको मनपर्ने डिश हो र यस तरिकाले उनी उनीहरूलाई माया गर्छिन्। शुभकामना।
नमस्कार म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहान्छु। मैले अर्को दिन दाल बनायो र तिनीहरू साँच्चिकै बाक्लो बाहिर आए। मैले टिप्पणीहरू पढेको छु जसमा यसले मेरो श solved्काको समाधान गर्दछ र यसले तपाईंलाई कुनै फरक पार्दैन र मैले यो देखेको छु कि दालको तौल भिजिए पछि छ (ती ती त मेरो लागि छोडिए, जुन मैले त्यसलाई सुख्खा तौल्यौं, तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ) एउटा उपाय)। मेरो प्रश्न यो छ कि म कसरी सुक्खा दालको मात्रा गणना गर्दछु कि तौल प्राप्त गर्न एक पटक तिनीहरू भिजेको छ।
तपाईको ध्यानाकर्षणका लागि धेरै धन्यबाद, तपाईसँग धेरै धैर्यता छ।
नमस्ते मारीबेल, सत्य यो हो कि मैले यो पहिले नै आँखाले गणना गरेको छु, तर मैले तिनीहरूलाई कहिल्यै सुख्खा तौल कहिल्यै गरिन। अर्को चोटि मलाई यो याद भयो र यो नुस्खामा राख्नुहोला। चुम्बनहरू र हामीलाई हेर्नु भएकोमा तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
उह। घर मा एक डिश हो जुन उनीहरूले मन पराउँछन् (बच्चाहरू पनि) तर म उनीहरूलाई सँधै प्रेशर कुकरमा बनाउँदछु, तर सत्य यो हो कि यी धेरै राम्रा छन्। तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
धेरै पाजलाई धन्यबाद! म खुशी छु कि तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। शुभकामना।
भोलि म दाल बनाउनेछु, कति जनालाई राख्नु पर्छ
नमस्ते कार्मेन, मलाई लाग्छ कि आधा पदार्थहरूसँगै यो ठीक हुनेछ। शुभकामना।
नमस्कार, म लामो समयदेखि थर्मोमिक्सको साथ थिएँ, तर मैले साना कामहरू गरें, तर मैले तपाईंको ब्लग पत्ता लगाए पछि, म प्रोत्साहित छु। दालको लागि यो नुस्खाको लागि एउटा प्रश्न, मेरो आमाको घरमा दाल सधैं चामलको साथ बनाइएको छ, मलाई कहिले चामल थप्ने छ?
२ rice मिनेट पछि चामल थप्नुहोस्, लगभग २० मिनेट पकाएर १००º मा यो चामल पकाउन पर्याप्त हुनेछ।
मसँग Thermomix 21 छ र कहिले पनि चना वा सिमी बनाएको छैन। तपाईंले प्रकाशित गरेको व्यबहारहरू हेर्दा, मँ प्रमाणित गर्दछु कि तपाईं जहिले पनि भाँटा छोला राख्नुहुन्छ। के ती भिजाउन सकिदैन? उत्तरको लागि अग्रिम धन्यवाद
हो, मारिसा, तर यो केवल समयको अभावले गर्दा हो कि डु us्गा हाम्रो लागि बढी सहज छ र किनभने समय कडा भएन भने उत्तम गणना गरिन्छ।
स्पष्टीकरण को लागी धन्यवाद, तर म तपाईलाई मलाई खाना पकाउने अनुमानित समय बताउन चाहन्छु कि भिजेको फलहरू छन्। फेरि पनि धन्यबाद।
नमस्ते सिभिया, एक सानो प्रश्न, के तपाईं दाललाई पानीमा राख्नु हुन्छ कि यो आवश्यक छैन? मैले सुनेको छु कि त्यहाँ त्यस्तो छैन जो त्यहाँ छन्। धन्यवाद
जोसेरामलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, आज मैले थर्मामिक्स रिलिज गरेको छु मैले दाल बनाएको हो जस्तो कि पुस्तकले भन्छ, यो राम्रो स्वादमा आएको छ तर धेरै बाक्लो, मैले थोरै पानी थपेको छु र यसलाई तल राखे पछि यो शुद्ध थियो, मैले राखेको छैन। पुतली उनले पुस्तकमा राख्दैनन्
के तपाईंले चम्चाको गति राख्नु भयो? मसूर, मलाई यो मन पर्छ, तर तिनीहरू पकाउन एकदमै लाज मान्दछन् ...
इलेना तपाईले के भन्न खोज्नु हुन्छ म्याद माथि बास्केट राख्नु भन्दा म यो लिट्ल एगो हुँ र म धेरै धन्यवाद नियन्त्रण छैन।
BE लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार बी, यसको मतलब यो छ कि पोनर कपको सट्टामा हामीले टोकरी राख्यौं ...
तपाईं देख्नुहुनेछ कसरी अलि अलि गर्दै तपाईंले चाल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ
हिजो मैले रेसिपी बनाएँ र ती स्वाद चाखिए तर एउटा शंका उत्पन्न भयो। मैले दाल तान्नु भन्दा पहिले तौल्यौं र जब म तिनीहरूलाई पकाउन राख्छु तब ती दुई गुणा तौल।
डरले गर्दा, म ती सबै गर्दिन, र मेरो स्वादको लागि तिनीहरू अलिकति बग्दै छन्। नुसार अनुसार दाल कहिले तौल गरिनेछ, पानीमा राख्नु अघि वा पछाडि।
नमस्कार ल्युसी, तपाईले तौल गर्नु पर्छ सुक्खा। जब तपाईंले तिनीहरूलाई भिजाउनुहुन्छ, तिनीहरूले हाइड्रेट र पानी ग्रहण गर्छन्, यही कारणले तिनीहरू दुई तौल गर्छन्, वास्तवमा आकारमा दुई गुणा। तिनीहरू थोरै बग्ने छन् किनकि तपाईंले ती सबै थप्नुभएन। यसलाई समाधान गर्ने एउटा तरिका उनीहरूलाई भारोमा तापमानमा छोड्नु पर्थ्यो, बीकरबिना about-१० मिनेटको लागि, त्यसैले पानी अलि बढी बाफ हुने थियो। धन्यवाद! तिनीहरूलाई फेरि गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् यो कस्तो थियो।
म एक लामो समय को लागी लेख्न चाहान्छु मलाई व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद दिन र विशेष गरी यो म एक चीज गर्दछु। कहिले काँही म तरकारीको सेवन बृद्धि गर्न हरी मिर्च जोड्छु र ती चुचिए पछि, कोहीले पनि अलग राख्दैन।
मैले २ 250० बटा दाललाई भिजाउन र करीव 30० मिनेट समय राख्छु। कहिलेकाँही म टुक्राहरूमा स्टिक थप्छु ताकि डिश अनुपम डिशको रूपमा कार्य गर्दछ।
मैले भने। धन्यबाद र शुभकामना
मारिवी 36 भन्यो
माफ गर्नुहोला केटीहरू, तर तपाईंले भर्खर मलाई मात्र पेस गर्नुभयो 🙂
टिप्पणीमा पढ्दा यो पत्ता लगाउन कि दालको तौल भिजेको छ वा सुकेको छ।
मार्च,, २०११ मा एलेना र मे २,, २०११ लाई संकेतको साथ भन्छन कि दालको तौल सोकमा छ
आइरिन जनवरी १,, २०१२ मा उनको टिप्पणीमा भन्छिन् कि दालको तौल ड्राई हो
सुख्खा वा भिजाउने? के त्यो चीजहरू धेरै परिवर्तन हुन्छन्?
बाँकी तपाईं यो कसरी गर्नुहुन्छ?
म यस सल्लाहलाई नुस्खामा थप्न सल्लाह दिन्छु
Pd.- हेरौं कि भाग्य को एक थोडा संग तपाईं मलाई जवाफ दिन सक्नुहुन्छ किनकि आज म फेरि कोशिस गर्ने छु किनभने म कहिले दाल राम्रो संग प्राप्त गर्दैनौं।
Marivi36 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मारिवी, म अझै पनी सोच्दछु कि दालको तौल भिज्नु अघि नै गर्नुपर्दछ र यदि होईन भने, एलेनाको नयाँ ब्लगमा हेर्नुहोस्, जसले भर्खरै स्ट्युउड मसूरको रेसिपी अपलोड गरेको छ: http://www.misthermorecetas.com/2012/02/01/lentejas-estofadas/
म आशा गर्छु कि मैले तपाईंको लागि स्पष्टीकरण दिएँ!
म केवल ब्लग को लागी धन्यवाद दिन चाहान्छु। मैले देखेको हुनाले, म मेरो Thx धेरै अधिक प्रयोग गर्दछु। आह दाल स्वादिष्ट हुन्छ। म तिनीहरूलाई बनाउनको लागि अब भाँडा प्रयोग गर्दिन
धन्यवाद Rocío! यो सबै त्यस्तै हो जुन हामी सबै हाम्रो टीएमएक्सबाट अधिक लिन्छौं। दालहरू मेरो मनपर्ने भाँसाहरू मध्ये एक हुन्, त्यसैले म तपाईंलाई अभिव्यक्तिपूर्वक बुझ्छु। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
महान, फोटोमा एक जस्तै र मैले आधा सामग्रीहरू बनाएँ र मेरो घरमा हामी दुई जना मात्र छौं। यी अद्भुत व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
हामीलाई एम्मा अनुसरण गर्न धन्यबाद! म धेरै खुसी छु कि उनीहरूले तपाईलाई यति राम्रोसँग फिट गरे। शेफलाई बधाई!
नमस्ते केटीहरू। सबै भन्दा पहिले म तपाईंलाई ब्लग मा बधाई छ। यो मेरो बहिनी सासू सिल्भिया र सत्य मलाई सिफारिश थियो ... म यो प्रेम !! म यसलाई धेरै हेर्छु र मैले गरेका सबै कुरा राम्ररी बाहिर आयो। यी दालहरू जस्तै जुन मेरो सम्पूर्ण परिवार र मेरो लागि सफल भएको छ। स्वादिष्ट !! त्यहाँ भएकोमा र फेरि बधाईको लागि धन्यबाद।
नमस्ते मायेटे, म त्यहाँ खुसी छु कि तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि यो एक ठूलो समर्थन हो ... धन्यवाद।
एउटा शंका, brown०० ग्रान खैरो दाल जब तिनीहरू पानीमा एक घण्टा भिजाइन्छ वा dry०० जीआर सुक्खा हुन्छ? के त्यो दालको वजन भिजाउने को केही घण्टा पछि धेरै माथि जान्छ र गिलास धेरै भरिन्छ। धन्यबाद र बधाई को लागी ब्लग को लागी, म यसलाई धेरै अनुसरण गर्दछु र मैले पहिले नै तपाईका महान् कार्यहरू गरेको छु। धेरै जस्तै म अझै पनि मसूरको दालको खोजीमा छु र म यी प्रयास गर्न चाहन्छु।
हेलो एल्बर, पेसोहरू सँधै सुख्खा हुन्छन् (दाल, पास्ता, चामल ...)। यो तपाइँ के भन्नुहुन्छ भनेर, भिजेको पछि, तिनीहरू हाइड्रेट गरिएको छ र धेरै पानी अवशोषित गरेको छ, यसकारण, तिनीहरू अधिक तौल गर्छन्। याद राख्नुहोस्: सँधै सुख्खा र पकाइएको खानाको तौल। भाग्यशाली !!
जब मैले स्पीड चम्चा राख्छु र बाँया पट्टि घुम्दछु, तपाईंले गति १ राख्नु पर्छ र पुतलीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। तिनीहरू जस्तै स्वादिष्ट बाहिर आउँछन्! खुशी, तपाईं देख्नुहुनेछ।
मलागा 258१२ भन्यो
म दाल पकाउँदैछु। मा तिमीलाई भन्छु
मलागा 258१२ लाई जवाफ दिनुहोस्
Uuuuu के एक रोमाञ्चक ... यो कसरी जान्छ हेरौं ...
नमस्ते क्यारोलिन! त्यो सँधै हुन्छ, र पनि, यो संकेत हो कि दाल राम्रो गुणको हुन्छ किनकि तिनीहरूले बाक्लो र शक्तिशाली शोरबा बनाएका छन्। म सधैं के गर्दछु जब तिनीहरू तल चिसो हुन्छन्, अर्को दिन ट्रीपरहरू राख्न वा कन्टेनरमा राख्नको लागि अर्को दिन, म थोरै पानी र एक चुटकी नुन थप्छु। राम्रोसँग हल्लाउनुहोस् र यो हो। तातो हुँदा, तिनीहरूले खोज्नु भएको बनावट फेरि प्राप्त गर्दछन्। र यदि तपाईं तिनीहरूलाई तताउनुहुँदा तपाईंले देख्नुहुनेछ कि ती अझै बाक्लो छन्, पानीको एक झिल्ली र एक चुटकी नुन थप्नुहोस्। भाग्यमानी!
गेब्रियल Urretxu आर्बे भन्यो
म यो थर्मोमिक्सबाट सुरू गर्दैछु र प्रश्न सोध्न चाहान्छु। जब यसले min 45 मिनेट tª१० मा सेट गर्छ यसको मतलब 100 45 मिनेट यो तापक्रममा पुग्ने भएकोले वा जब तपाईं यसलाई खोल्नुहुन्छ? मैले याद गरें कि १०० को तापमानमा पुग्न उसले १० मिनेट खर्च गरेको छ। मैले बुझें कि हामी के गर्छौं भने खाना पकाउने समय निकाल्छ र ती कठिन हुनेछन् ...
गेब्रियल Urretxu आर्बेलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार गब्रिएल, समयहरू सँधै नै हुन् तपाईले यो शुरू गर्नु भएपछि, सबै व्यंजनहरूमा त्यो हो, तपाईं º 45 मिनेट १००º मा प्रोग्राम गर्नुहुन्छ र तपाईं बिर्सनुभयो। पछि, जब त्यो समय समाप्त हुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई स्वाद लिनुहुन्छ र यदि तपाईंलाई उनीहरू नरम मनपर्दछ र त्यसपछि त्यहि तापक्रममा or वा १० थप मिनेट कार्यक्रम गर्नुहुन्छ।
मैले रेसिपी बनाएको छु र यसले प्रकोप देखा पर्‍यो, धेरै पानीको लागि थोरै दाल र म दाल बदाम बाहिर आएँ। एक अनियन्त्रित समय पनि। मैले अरूलाई धेरै कम पानीले बनाउनु पर्थ्यो, तिनीहरूमा पिठो हालिदे ताकि सस बाक्लो आयो र १ minutes मिनेट पर्याप्त भयो। मैले के गरे कुचल स्ट्रे-फ्राइ जस्तो छ किनकि त्यो त्यस्तो फेला परेन।
नमस्ते अमलिया, एक प्रश्न, तपाईले के दाल प्रयोग गर्नुभयो? डिब्बाबंद वा सुका कैन्डहरू?
यो विधि सुक्खा दालको साथ बनाईएको हो, र जब तपाइँ तपाइँको सन्देश देख्नुहुन्छ ... यस्तो देखिन्छ कि तपाईंले ती पातहरू पहिले नै भाँडाबाट पकाइसकेका बनाउनुभएको छ, यो हुन सक्छ? मलाई भन त म तिमीलाई भन्न सक्छु!
महान अमलिया! म असाध्यै खुसी छु कि तपाई निराश हुनुहुन्न र तपाई प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई भन तिमी कसरी गर्छौ? र यदि तपाईंसँग दालहरू १ just मिनेटमा नै तयार छ भने, कृपया मलाई भन्नुहोस् यो कस्तो ब्रान्ड हो ... त्यो अविश्वसनीय हो! एउटा ठूलो चुम्बन र धन्यवाद तपाईंलाई हामीलाई पछ्याउन र हामीलाई टिप्पणी छोड्नु भएकोमा।
सारा अजेय भन्यो
मेरो केटा र म महान छौं। धन्यवाद।
सारा अजेयलाई जवाफ दिनुहोस्
म कति सानो छु, म कत्ति खुसी छु, किनकि म सानो हुँदादेखि दाल मेरो मन पर्ने खाना हो र घरमा हामी हरेक हप्ता तिनीहरूलाई खायौं। हामीलाई लेख्न र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
एउटा प्रश्न मलाई थाहा छैन कि कहाँ राख्नुपर्छ र टोकरी के हो
नमस्ते इसाबेल, तपाइँको थर्मोमिक्सको लागि निर्देशनहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ सबै वर्णन गरिएको छ। टोकरी चीजहरू पकाउन गिलासको भित्र राखिन्छ र ब्लेडहरूले तिनीहरूलाई कुचल्दैन। एक strainer / जल निकासीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्, तपाई देख्नुहुनेछ कति अद्भुत!
नमस्कार र तपाईको ब्ल्गका लागि धेरै धन्यबाद, सत्य यो हो कि यसले मलाई धेरै मद्दत गर्दछ, तर केवल यस नुस्खामा त्यहाँ एउटा कुरा छ जुन म राम्रोसँग बुझ्दिन। नोजलको टोकरीको बारेमा के हो ????????????? केहि खाली बिना नै खाली हो ……………… म बुझ्दिन, तल तपाइँका टिप्पणीहरूमा म बुझ्छु कि यो केहि ढिक्कामा यस प्रकारको टुप्पोमा छ, तर मेरो टिप्पणी भित्र क्यू राख्छ। ??????? ????????
Estergogui@hotmail.com लाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो एस्तेर, हामीलाई अनुसरण गर्न र हामीलाई लेख्नु भएकोमा धन्यवाद। वास्तवमा, टोकरी ढक्कनको माथि राखिन्छ, चार खुट्टामा आराम गरेर। हामी यसलाई कपको साथ बदल्छौं। हामी यसबाट के पाउँछौं? पानीलाई वाष्पीकरण र शोरबा गाढा बनाउन दिनुहोस्, मानौं हामी यो थर्मोमिक्स भेट्टाएझैं गरीरहेछौं, तर किनकि यो उमालेको छ, यसले छर्नु पर्छ। बास्केटले स्प्लैशिंग र सबै दाग रोक्न सक्छ, तर यो टोकरीको कारण वाष्पीकरण गर्न जारी रहनेछ। म आशा गर्छु कि मैले सहयोग गरेको छु! चुम्बन
शमूएल रोमेरो अल्सेडो भन्यो
तिनीहरू समान कदमहरू अनुसरण गरेर मेरो लागि महान साबित भए!
उनीहरू स्वादिष्ट थिए!
शमूएल रोमेरो एल्सिडोलाई जवाफ दिनुहोस्
एन्कोरा सान्तेला भन्यो
आज मैले दाल पकाएको छ र ती धनीका उत्कृष्ट छन्, मैले चामलको केही अन्न थपेका छन् उनीहरू धेरै धनी छन्। यी स्वादिष्ट र परम्परागत व्यंजनहरू राख्नु भएकोमा धन्यवाद।
एन्कोरा सान्तेलालाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो घरमा उनीहरूले गेफाइहरू, खास गरी कालो गेडाहरूसहितको चामल राख्दछन्, तिनीहरू नरम हुन्छन्, हैन?
अविश्वसनीय दाल यो मेरो पहिलो नुस्खा हो र ती सबै बाहिर आउँछन् म आफूलाई मास्टर शेफको साथ परिचय गर्ने छु।
अन्तिम चिन्ह हुनु अघि दुई रेखाहरू छन्? धन्यबाद।
नमस्ते मारी कारमेन, तपाईं माथिको लाइनमा संकेत गर्दै हुनुहुन्छ, २ लिटरको साथ एक। 🙂
मलाई तपाईंको रेसिपीहरू र तपाईंको वेबसाइट मनपर्दछ। सबै स्वादिष्ट छ। म तपाईंलाई केही हदसम्म अफ-शीर्षक प्रश्न सोध्छु, कसले तपाईंलाई वेबसाइट बनायो? धन्यवाद अभिवादन
दाल ब्लेडको साथ आउँदैन?
देसीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार विधि राम्ररी बाहिर आएन। सबै सुपर कुचिएको र थोरै स्वादको साथ। मैले चोरिजो हटाएँ किनकि मैले यसलाई खान सक्दिन किनकि यो शुद्ध थियो। म प्रश्नहरू सोध्छु: के ती खैरो दाल हुनुपर्दछ र भिजेको हुन्छ त्यसैले तौल वा तौल पहिले? जब तपाईले नुहाइमा कप कप हटाउने भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ र त्यसपछि यो भन्छ कि तपाईले कपडा समातेर लुगा राख्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई लगाउनु भनेको हो या होइन? यदि तपाईं अन्तमा रेसिपी हेर्नुभयो भने जब प्याप्रिका थपियो, तपाईंले त्यसलाई राख्नुभयो। म आशा गर्छु कि उनीहरू राम्रोसँग अर्को पटक आउँछन्। तपाईको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। अभिवादन
नमस्ते अलेक्जान्ड्रा, हामीले प्रयोग गर्ने मसूर पर्दिनास हो र हामी तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा रात अघि भिजाउन छोड्दछौं। तपाईंले भिजाउनु अघि तिनीहरूलाई तौल गर्नु पर्छ। तर यो सत्य हो कि केही ब्रान्डहरू अरू भन्दा बढी कोमल हुन्छन्। गब्लेटमा: पहिले तपाईले राख्नुहोस् र जब यो १०० डिग्री पुग्छ तपाईले त्यसलाई हटाउनुहुन्छ र टोकरी राख्नुहुन्छ, त्यसैले हामी पानीलाई वाष्पीकरण गर्न दिनेछौं र शोरबा बाक्लो हुन दिनेछ तर यो छर्ने छैन। स्वाद बढाउनको लागि हामी मासु केन्द्रित ट्याब्लेट प्रयोग गर्छौं, तर यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं पानीलाई कुखुराको ब्रोथको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी आशा गर्दछौं कि हामीले तपाईंलाई सहयोग गरेका छौं, लेख्नका लागि धन्यबाद!
अना मारिया Muñoz डे ला Fuente भन्यो
मैले यो नुस्खामा टिप्पणी गर्न रोक्न सकिन, केवल "ठूलो, स्वादिष्ट दाल।"
Ana María Muñoz de la Fuente लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद अना! यो टिप्पणीहरू पढेर राम्रो लाग्यो 🙂
के दाल भाँडाबाट आएका हो?
नमस्ते जैमे, होइन, तिनीहरू सुक्खा दाल हुन्। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं उनीहरूलाई रात अघि भिजाउन सक्नुहुन्छ वा केहि घण्टा अघि (मलाई तिनीहरूलाई भिजाएर राम्रो मनपर्दछ) तर तपाईं तिनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लामो पनि पकाउन सक्नुहुनेछ जबसम्म तिनीहरू पार्दिनस छन्। यदि तपाईं क्यान्ड दाल प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले खाना पकाउने समय २० मिनेटमा कम गर्नुपर्नेछ जब तपाईं दाल थप्नुहुन्छ। म आशा गर्छु कि मैले सहयोग गरेको छु! शुभकामना,।
टर्मोमिक्सका लागि चोरिजोको साथ धेरै राम्रा दालहरू
फ्रान्चेस्कालाई जवाफ दिनुहोस्
मैले दाल पकाएँ र ती स्वादिष्ट छन्! अवश्य पनि, chorizo ​​बिना, स्वस्थ र क्रूरता मुक्त। तिनीहरू जस्तै स्वादिष्ट छन् र एक सुपर पूर्ण र स्वस्थ खाना बन्न!
नमस्ते रोसियो, राम्रो !! तपाईको सन्देश को लागी धेरै धन्यबाद 😉
केक वा पेस्ट्रीहरू भर्न चकलेट क्रीम
TM5 को साथ Vichyssoise